कोरोनासँग जुझिरहेका निर्देशक लामिछाने भन्छन्, ‘आज आत्मा दुखेको छ’ « रिपोर्टर्स नेपाल
कोरोनासँग जुझिरहेका निर्देशक लामिछाने भन्छन्, ‘आज आत्मा दुखेको छ’
काठमाडौं, ४ जेठ । नेपाली फिल्मका निर्देशक ऋषि लामिछाने कोरोना संक्रमित भएपछि ४ दिनदेखि अस्पतामा भर्ना भएका छन् । उनको धापासीमा रहेको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।
उनीसहित उनकी श्रीमती तथा कलाकार सरीता लामिछाने र छोरी समृद्वि पनि संक्रमित भएका थिए । तर, उनीहरुको अवस्था सामान्य छ । निर्देशक लामिछाने निमोनिया बढेपछि अस्पताल भर्ना भएका हुन् । उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भैरहेको स्रोतले जनाएको छ।
अस्पतालमा उपचार गराइरहेका लामिछानेले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भावुक स्ट्याटस लेखेका छन् । उनले पुरै जीवन दुेखेको उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ आज हस्पिटल बसाईको चौथो दिन !
कोठाको ४ वटा भित्ताले घरि घरि पिडा दिईरहेछ्न ! असाध्य असहज र पिडादायि लाग्थ्यो दुख्ने शरिर , मन र मुटु मात्र हुन्छ! यहा त सपना पनी , बिपना पनी , कल्पना पनी सबै दुख्दो रैछ ! पुरा जीवन दुखेको छ ! अस्ति अस्ति शरिर दुख्दा पिडाले रोएको थिए !’
चार दिन देखि अस्पतालको बेडमा रहेका निर्देशक लामिछानेले अगाडी लेखेका छन्, ‘आज आत्म दुखेको छ ग्रान्डी हस्पिटलको नबौ तल्ला बाट बाहिर हेर्दै चिच्याई चिच्याई कराउन मन लागेको छ ! बिहानै एकजना हेरचाह गर्ने बहिनी आएर भनिन पल्लो कोठामा कोरोना सङ्ग लड्दै गरेको एकजना दाईले भन्नुभयो रे कहिले काहि मृत्यु भन्दा जीवन असहज लाग्दोरैछ ।’
तस्वीरः ऋषि लामिछानेको फेसबुकबाट